शृंगार विज्ञान - सौन्दर्य - प्रकाशितः भाद्र २३, २०७७ - नारी
भाद्र १८, २०७७ चुरा, पोते, टीका, शिरबन्दी, पाउजु, गाजल आदि नारीका शृंगारसँग सम्बन्धित छन् । नाडीमा चुरा, निधारमा टीका, आँखामा गाजल, शिरमा शिरबन्दी, खुट्टामा पाउजु लगाएपछि नारीको सुन्दरता खुल्छ । तर यी सम्पूर्ण प्रसाधनले एक नारीलाई सुशोभित मात्र बनाउँदैन, भावनात्मक र शारीरिक रूपमा समेत फाइदा पुर्‍याउँछ ।
पूर्वीय समाजमा नारी शृंगारको खास महत्व र अर्थ छ । हाम्रो संस्कृतिमा नारीको सोह्र शृंगारको व्याख्या गरिएको छ । यसमा शिरबन्दीदेखि पाउजुसम्म समेटिएका छन् । खासगरी विवाहित महिलाको हकमा सोह्र शृंगारलाई महत्व दिइएको छ । विवाह, चाडपर्व, उत्सव एवं पूजाआजामा सोह्र शृंगारमा सजिनुपर्ने बताइन्छ । हाम्रो समाजमा नारीका शृंगारलाई पवित्रता र प्रेमका रूपमा समेत अर्थ्याउने गरिन्छ ।
के छ महत्व ?
प्राचीनकालमा शृंगारको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? कहिलेदेखि भयो ? कसरी भयो ? यस विषयमा स्पष्ट जानकारी छैन । यद्यपि सदियौंदेखि शृंगारलाई नारी सौन्दर्यकै एक हिस्सा मान्दै आएको पाइन्छ ।
विवाहित वा अविवाहित महिलाबीचको भेद छुट्याउने माध्यम हो–सिन्दूर । सिन्दूरलाई विवाहित महिलाको चिनारी र सुरक्षा कवचसमेत मानिन्छ । सिन्दूर लगाइने भाग संवेदनशील मानिन्छ । सिन्दूरमा पाइने मर्करीले टाउकालाई शीतल बनाउनुका साथै तनावमुक्त राख्ने उल्लेख छ ।
केशमा सुगन्धित तेल लगाई आकर्षक बनाएर सजाइन्छ । केशलाई जूरो बनाएर सजाउनाले सुन्दर र सौम्य देखाउनुका साथै केश झर्न र टुट्नबाट पनि जोगाउँछ । टाउको दुख्ने, माइग्रेनजस्ता रोग लाग्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
बिन्दी अर्थात् टीका । निधारको मध्यमागमा टीका लगाएपछि नारीको सौन्दर्य अझ खुल्छ । यसलाई सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ । जुन भागमा बिन्दी लगाइन्छ, त्यो भागलाई आज्ञाचक्र रहेको बताइन्छ । यसले मनलाई शान्त र तनावरहित राख्न समेत मद्दत गर्ने विश्वास गरिन्छ । साथै अनिद्रा एवं टाउको दुखाइमा समेत राहत मिल्ने बताइन्छ ।
गाजलले आँखाको सुन्दरतालाई अझ आकर्षक बनाउँछ । त्यसो त गाजल तयार पार्न प्रयोग गरिने वस्तुले आँखाको दृष्टिलाई राम्रो बनाउँछ भनिन्छ । आँखाको सुरक्षाका लागि पनि गाजलको भूमिका रहन्छ ।
कानमा झुम्का विवाहित तथा अविवाहित दुवैले लगाउँछन् । कानमा प्वाल बनाएर त्यसमा लगाइने सुनको झुम्काले शरीर ऊर्जावान् बनाउँछ । मासिक धर्मसँग जोडिएको समस्याबाट पनि छुटकारा पाउने बताइन्छ ।
पहिले नाकको बीचमा प्वाल पारेर फूली लगाउने प्रचलन थियो । अहिले पनि कतिपयले फेसनका रूपमा फूली लगाउने गरे पनि यसको साजसज्जामा विविधता आएको छ । फूली लगाउने प्रचलन हराए पनि नाकमा प्वाल पारेर फूली लगाउने गरिन्छ । मासिक धर्ममा हुने पीडा कम गर्छ भन्ने प्रचलन छ । किनभने बायाँ नाकको स्नायुको सम्बन्ध महिलाको गर्भाशयसँग हुन्छ ।
मंगलसूत्र विवाहित महिलाको प्रतीक हो । साडीजस्ता परम्परागत पहिरनसँग यस्ता गहनाको संयोजन आकर्षक देखिन्छ । हार एवं मंगलसूत्र सुन वा अन्य धातुबाट तयार हुन्छ । गलामा यसको स्पर्शले फाइदा हुने बताइन्छ । खासगरी छाला र रक्त प्रवाहमा यसले प्रभाव पार्ने विश्वास गरिन्छ ।
विवाहित वा अविवाहित सबैले नाडीमा चुरा लगाउन सक्छन् । विवाह, चाडपर्वजस्ता विशेष अवसरमा चुरा लगाइन्छ । चुरा नारी सौन्दर्यकै एउटा हिस्सा हो । तर यसलाई सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडेर पनि व्याख्या गरिन्छ ।
काँचको चुरा नाडीमा लगाउँदा त्यसको घर्षणले रक्तसंचार प्रक्रियालाई राम्रो बनाउने धारणा रहेको छ । चुराहरू आपसमा ठोक्किएर निस्कने आवाजले सकारात्मक ऊर्जा दिने बताइन्छ । साथै चुरा बजेको आवाजले घरमा महिला भएको आभास पनि दिलाउँछ ।
बाजु पनि हातमा लगाउने आभूषण हो । यो सुन वा चाँदीजस्ता धातुको हुन्छ । यसले रक्तसञ्चार राम्रो बनाउँछ ।
औंलामा थरीथरीका औंठी लगाउने चलन छ । विवाहको बेला दुलहा–दुलहीले औंठी साटासाट गरेर उनीहरूको सम्बन्धलाई अरू दिगो बनाउने मान्यता छ । औंलामा औंठी लगाउँदा मस्तिष्क र मुटुलाई राम्रो प्रभाव पर्ने बताइन्छ । मानसिक एकाग्रताका लागि पनि औंठीले भूमिका खेल्ने विश्वास गरिन्छ ।
खासगरी साउनको महिना, विवाह र चाडपर्वमा मेहन्दी लगाउने गरिन्छ । हात–खुट्टामा मेहन्दी लगाइन्छ । यसले छाला राम्रो बनाउनुका साथै घाउ–खटिरा निको हुने विश्वास गरिन्छ ।
कम्मरमा सुन, चाँदी, हीरा, मोती जडान गरी विभिन्न आकारमा बनाइएको कम्मरबन्द लगाउने चलन छ । यसले सुन्दरता बढाउनुका साथै महिलाहरूको पेटसम्बन्धी रोगबाट पनि बचाउँछ अर्थात् पाचनतन्त्र बलियो बनाउँछ र प्रजनन प्रणाली पनि राम्रो बनाउँछ । मासिक धर्मको समयमा हुने पीडा पनि कम गर्छ ।
पाउजुको आवाजले सकारात्मक ऊर्जा मिल्छ । चाँदीको पाउजु लगाउँदा ढाड, कुर्कुच्चा, घुँडाको पीडा कम हुन्छ । पाउजुले हड्डी रगड्ने भएकाले हड्डीका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।
बिच्छि विवाहित महिलाको खुट्टाको औंलामा लगाउने गरिन्छ । चाँदीको बिच्छि सबैभन्दा शुभ मानिन्छ । महिलाको खुट्टाको औंलाको नसा उनको गर्भाशयसँग जोडिएको हुन्छ । बिच्छि लगाउँदा गर्भावस्था वा गर्भाशयसँग जोडिएको समस्यामा राहत मिल्ने बताइन्छ ।
खासगरी गुलाबको फूललाई प्रेमको प्रतीक मानिन्छ । यसको सुगन्धले पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सघाउनुका साथै एक–अर्कालाई आकर्षित गर्छ । सुगन्धले मानसिक तनाव हटाएर तरोताजा अनुभव गराउँछ ।
पहिरनको उचित संयोजनले पनि नारीको सौन्दर्यमा खास भूमिका खेल्छ । पहिरनमा पनि रातो रंगलाई शुभ मानिन्छ । उत्सव, पर्व, विवाह, पूजापाठमा रातो पहिरन लगाउनुपर्ने मान्यता छ । यो रंगलाई प्रेमको प्रतीक मान्ने गरिएको छ । धार्मिक आस्थाको हिसाबले यसलाई सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ ।
पुस १७, २०७६ - डिप्रेसनका लागि योग
मंसिर २, २०७६ - शृंगार, हराएका गहना
भाद्र ८, २०७६ - तीजको सोर्‍ह शृंगार
श्रावण ३०, २०७६ - भान्सामै रमाइलो
माघ १७, २०७५ - विवाह विशेष मेकअप
केश झर्ने समस्या वैशाख २०, २०७८
केशलाई ‘केराटिन ट्रिटमेन्ट’ वैशाख १६, २०७८
गर्मीमा छाला स्याहार वैशाख १५, २०७८
चिल्लो केशको हेरचाह चैत्र २३, २०७७
गर्मीमा छालाको सुरक्षा चैत्र १३, २०७७
नङको सौन्दर्य फाल्गुन १३, २०७७